Ny iPhone 13 Pro sy iPhone 13 Pro Max dia mizara fakan-tsary mitovy | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | | iPhone 13, About us
El Modely Pro ny laharam-pahamehana iPhone dia teraka mba handeha lavitra kokoa miaraka amin'ny finday avo lenta Apple. Nanamarika ny fahasamihafana misy eo amin'ny maodely mahazatra sy ity maodely vaovao ity izay nahatratra ny indostrian'ny audiovisual ilay kompana misy efitrano telo. Na izany aza, mandra-pahatongan'ny iPhone 12 Pro sy Pro Max Apple koa dia nanamarika ny tsy fitovizan'ny maodely iray sy ny iray hafa, indrindra fa ny stabilizer optika miaraka amin'ny fiovan'ny sensor. Raha nanana izany ny Pro Max, ny Pro dia niorina tamin'ny stabilization avo roa heny. Tamin'ny fahatongavan'i iPhone 13 Pro sy iPhone 13 Pro Max dia manjavona ary ireo fitaovana roa ireo dia mitondra ny fakan-tsary mitovy amin'ny famaritana mitovy.
Fakan-tsary mitovy sy mitovy amin'ny an'ny iPhone 13 Pro sy Pro Max
Ny rafitray fakantsary Pro dia nampiakatra ny bara tsy mbola nisy toy izany. Miaraka amin'ny fitaovana avo lenta izay afaka mamorona antsipiriany tsy mampino. Rindrambaiko marani-tsaina manome anao teknika sary sy horonan-tsary vaovao. Ary puce iray haingana be tsy misy antony ka manohitra ny fetran'ny azo atao. Tsy maintsy mahita ny sarinao ianao vao hino azy ireo.
Ny iPhone 13 Pro sy 13 Pro Max dia ao aoriany misy ny fakan-tsary telo izay mampiavaka ny elanelan'ny Pro. telephoto, zoro malalaka ary zoro ultra malalaka izay mamela anao haka sary sy handrakitra seho miaraka amina matihanina tanteraka. Ho fanampin'izany, Apple dia niandraikitra ny fampidirana fanatsarana lehibe sy matihanina toy ny mety fisian'ny firaketana ao amin'ny ProRes na ny fanatsarana ireo sensor rehetra amin'ireo fakantsary telo hanatsarana ny Mode Night na ahafahana miditra amin'ny tontolon'ny sary makro.
Mandra-pahatongan'ny fanombohan'ireto iPhones farany ireto dia nanao ny tsy fitovizany hatrany ireo maodely Pro roa azy i Apple. Ho fanampin'ny haben'ny efijery azy, ny iPhone 12 Pro Max dia nanambatra zoom akaiky Optical x2,5 akaiky, zoom optika x5 ary zoom zoom dizitaly hatramin'ny x12. Nampiavaka azy io tamin'ny rahalahiny iPhone 12 Pro. Nefa koa, Nampiavaka azy ireo ny fisian'ny stabilizer sary optika amin'ny alàlan'ny fanovana sensor, natokana ho an'ny Pro Max.
Mamirapiratra amin'ny fampisehoana ofisialy azy ireo ny iPhone 13 Pro sy Pro Max
Na izany aza, ity fahasamihafana ity dia manjavona ao amin'ny iPhone 13 Pro sy 13 Pro Max y samy maodely Mitondra fakan-tsary telo mitovy izy ireo miaraka amina famaritana ara-teknika mitovy:
77mm halava mifantoka
Zoomika optika x3
Aperture Ƒ / 2,8
Fanamafisana ny sary optika
13mm halava mifantoka
Aperture Ƒ / 1,8
Senserera haingana kokoa
26mm halava mifantoka
Piksel 1,9 μm
Aperture Ƒ / 1,5
Pixel mifantoka 100%
Solosaina singa fito
Fanamafisana ny sary optika avy amin'i Sensor Shift
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ny iPhone 13 Pro sy iPhone 13 Pro Max dia mizara fakan-tsary mitovy
Afaka mijery ny hetsika fampisehoana iPhone 13 indray ianao